တိုက်တေနီယမ်ကာဗိုက်အမှုန့်၊ TiC - Goodao Technology Co. , Ltd.
CAS ကုဒ် 12070-08-5
သိပ်သည်းဆ ၄ ။ 930 ဂရမ် / ml
အသုံးပြုသည် မြင့်မားသောအပူချိန်အပူမှုတ်လိမ်းရာတွင်အသုံးပြုသောတိုက်တေနီယမ်အမှုန့်၊ ဂဟေဆော်သောပစ္စည်းများ၊ Hard film ပစ္စည်းများ၊ စစ်ရေးလေကြောင်းဆိုင်ရာ matbalscarbide နှင့် cermet များတွင်အသုံးပြုသည်။ အပူပေးစက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဖြည့်စွက်အနေဖြင့် wearresistance ကိုတိုးတက်စေသည်
၁။ ဂုဏ်သတ္တိများ - မီးခိုးရောင်သတ္တုတောက်ပသောပုံဆောင်ခဲအစိုင်အခဲ၊
2. Density (g / cm3,25 ℃): 4.93
4. အရည်ပျော်မှတ် (℃): 3140
ပွက်ပွက်ဆူနေသော (℃, လေထုဖိအား): 4820
၆။ ပျော် ၀ င်နိုင်မှု: နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်နှင့်ရေထည်တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှုမရှိပါ။
7. Mohs ခိုင်မာသော:9~ 10
အပူတိုးချဲ့၏ 8 ကိန်း (K): 7.74 × 10-6
အပူစီးကူး (W / (M · K)): 21
ဖွဲ့စည်းခြင်း 10 အပူ (kJ / mol): -183,4
၁။ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ - တိုက်တေနီယမ်ကာဗိုက်ကြွေထည်များသည်အလွန်ခက်ခဲသောကိရိယာများဖြစ်သည်။ TiC ကိုအမျိုးမျိုးသောပေါင်းစပ်ကြွေထည်ပစ္စည်းများအဖြစ် TiN, WC, Al2O3 နှင့်အခြားကုန်ကြမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တိုက်တေနီယမ်ကာဗိုက်ကြွေထည်ကိုမြန်နှုန်းမြင့်ဝါယာကြိုးလမ်းညွှန်ဘီးနှင့်ကာဗွန်သံမဏိဖြတ်တောက်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သံမဏိနှင့်လခြမ်းကိုဝတ်ဆင်နိုင်မှုမရှိခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးနိုင်မှုကောင်းမွန်သည်။ တိုက်တေနီယမ်ကာဗိုက်ပါ ၀ င်သောကြွေထည်ပစ္စည်းများကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
2. Coating material - တိုက်တေနီယမ်ကာဗိုက်သည်အပေါ်ယံပိုင်းအနေဖြင့်ပွန်းပဲ့။ ခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အချို့သောအားကြီးသောကာဗိုက်များသည်စိန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သတ္တုများသို့မဟုတ်သတ္တုစပ်များပြုလုပ်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဓာတုနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသတ္တုများသို့မဟုတ်သတ္တုစပ်များသည်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်စိန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကာဗွန်အက်တမ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဤကာဗိုက်သည်စိန်နှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်နိုင်ရုံသာမကစိန်နှင့်မက်ထရစ်သတ္တုစပ်ကြားစွဲကပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်အတွက်၎င်းသည် matrix သတ္တုဖြင့်ကောင်းစွာစိမ့်ဝင်နိုင်သည်။ ရှုထောင့်၏သက်တမ်းသည်ဖြတ်စက်ပေါ်တွင် titanium carbide ပါးလွှာသောအဖုံးများထည့်ထားခြင်းဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုးနိုင်သည်။
၃။ နျူကလီးယားပေါင်းစပ်ဓာတ်ပေါင်းဖို၏လေ့လာချက်အရ၊ အပူထိန်းခြင်းပြီးနောက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းဓါတ်ရောင်ခြည်၊ အပူချိန်နှင့်အပူသံသရာတို့ကိုတိုက်တေနီယမ်ကာဗိုက်အပေါ်ယံလွှာနှင့် (TiN + TiC) ပေါင်းစပ်သည့်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်သုံးထရီယမ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော permeable အလွှာ။
၄။ ထို့အပြင်တိုက်တေနီယမ်ကာဗိုက်ကိုလည်းသံဖြူ၊ ခဲ၊ ကဒ်ဒီယမ်၊ သွပ်နှင့်အခြားသတ္တုများအရည်ပျော်စေရန်အတွက်သုံးနိုင်သည်။ ပွင့်လင်းသောတိုက်တေနီယမ်ကာဗိုက်ကြွေထည်များသည်ကောင်းမွန်သော optical ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ Molybdenum Carbide Powder, Mo2C
နောက်တစ်ခု: မန်းဂနိစ် Carbide အမှုန့်၊ Mn3C